सफ्टवेयरको काम छोडेर बाख्रा पालन गर्दै रुपन्देहीका यि युवा, जसले कमाउछन वार्षिक २० लाख! – Kantipur Press
भैरहवा । रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–३, बेताहानीका सन्दीप खनालले बाख्रापालनबाट वार्षिक २० लाख आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ ।सफ्टवेयर कम्पनीको जागिर छाडेर २०७३ सालबाट उहाँले बाख्रा पालन सुरु गर्नुभएको हो । सफ्टवेयर कम्पनीको जागिर छाडेर बाख्रा पालन गर्दा परिवारले मात्रै होइन, छरछिमेक र आफन्त सबैले ‘धेरै पढेर बुद्धि बिग्रिएछ’ भन्न थाले पनि उहाँमा कत्ति बिचलन आएन ।
मिहेनत गर्दै गएपछि सन्दीप अहिले सफल युवा किसान बन्नुभएको छ ।परिवारबाट त्यसबेला सन्दीपलाई भाइ सञ्जय खनालले मात्रै साथ दिनुभएको थियो । सञ्जयले दाईले गर्न लागेको बाख्रा पालन व्यवसाय राम्रो भएको भन्दै परिवारका सदस्यलाई सम्झाउनुभयो । सन्दीपले पनि पटक–पटक सम्झाउनुभयो । जसरी पनि बाख्रा पालन गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका सन्दीपले ५० वटाबाट बाख्रा पाल्न सुरु गर्नुभयो । यसअघि उहाँले भारतको देहरादुनमा रहेको अमेरिकी एनएमसी सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्दै आउनुभएको थियो ।
उहाँ बाख्राको स्याहारसुसारमा रातदिन खटिनुभयो । विस्तारै बाख्रा पालन राम्रो हुँदै गयो । अहिले एस.के. गोट फार्मका नामबाट उहाँले व्यावसायिकरुपमा चार सय बढी बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएको छ ।
फार्म राम्रो बन्दै गएपछि सुरुसुरुमा ‘धेरै पढेर बुद्धि बिग्रिएछ’ भन्नेहरु पनि अहिले सन्दीप र सञ्जयको प्रगति देखेर चकित छन् । खनाल परिवार अहिले बाख्रा पालेरै छरछिमेकमा मात्रै होइन, जिल्लामै सबैको हाईहाई बनेका छन् । फार्ममा खरी, तराई, जमुना पारी, विटो, अज्मेरी, वोयर र वोयर क्रस जातका बाख्रा छन् ।
बीउका लागि सन्दीपले अष्टेलियाबाट वोयर जातको बोका लिनुभएको छ । साढे १२ कठ्ठा जमिनमा बाख्रा पालन गरिएको छ । जग्गाबाहेक दुईकरोड बढी लगानी गरिएको छ । उहाँहरुले वार्षिक एक करोड बढीको खसीबोका र बाख्रा विक्री गर्दै आउनुभएको छ । सबै खर्च कटाएर २० लाख बढी बचत हुने गरेको छ । बाख्राका लागि सात विगाह जमिनमा घाँस लगाइएको छ । फार्मलाई कृषि विकास बैंक लिमिटेडले ब्याज अनुदान दिएको छ ।
फार्ममा काम गर्ने पाँचजना कर्मचारी छन् । परिवारका पाँचजना पनि बाख्राको सुसारमा रातदिन खट्छन् । यसबाहेक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरी दुईसय ५० जनाले रोजगारी पाएका छन् । फार्मबाट मनग्य आम्दानी भएपछि र सबैको प्रशंसक बन्दै गएपछि सन्दीपले अन्य ठाउँमा पनि व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ।
उहाँले पाँच वर्षभित्र कम्तिमा विभिन्न जिल्लाका २०/२५ ठाउँमा व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने योजना सुनाउनुभयो । नेपालमा खसीबोका र बाख्राको बजार राम्रो छ । नेपाली उत्पादनले अपुग भएपछि बाह्य मुलुकबाट बर्षेनी लाखौंको संख्यामा खसीबोका आयात हुन्छ । उनीहरुको पनि फार्मबाटै सबै विक्री हुने गरेको छ ।